Kursigii ugu xiisaha badnaa oo caawa Gaalkacyo looga adkaaday xildhibaan si aad ah u cabsaneyd Farmaajo - Caasimada Online
Home Warar Kursigii ugu xiisaha badnaa oo caawa Gaalkacyo looga adkaaday xildhibaan si aad...
Kursigii ugu xiisaha badnaa oo caawa Gaalkacyo looga adkaaday xildhibaan si aad ah u cabsaneyd Farmaajo
Gaalkacyo (Caasimada Online) – Waxaa hadda lasoo gabagabeeyey doorashada kursiga HOP#060, kaas oo 8-dii sano ee lasoo dhaafay ay ku fadhisay Ubax Tahliil Warsame, waxaana caawa ku guuleysatay Xildhibaan Qaali Cali Shire (Sawirka kore).
Kursigaan oo doorashadiisu ay ka dhacday magaalada Gaalkacyo, tartankiisu waxuu ahaa mid furan, waxaana ku loolamay afar musharax oo dhamaantood haween ah, maadaama loo asteeyey qoondo haween.
Doorashada kursigaan ayaa la isla aaday wareeg labaad oo ay isugu soo hareen Ubax Tahliil Warsame oo wareegii koowaad heshay 44-cod iyo Qaali Cali Shire oo wareegii koowaad heysatay 32-cod.
Markii ay soo dhamaatay codeynta wareega labaad, waxaa guuleysatay Qaali Cali Shire oo heshay 61-cod, halka Ubax Tahliil ay heshay 40-cod
Musharaxiinta kala ah:
1 – Ubax Tahliil
2 – Qaali Cali Shire
3 – Hodan Shire
4 – Wacan Xaaji
Hase yeeshee, taageeradaas ayey caawa ku weysay kursigaas, ayada oo ergadii codeysay ay u muujiyeen in qof waxqabadkiisa kaliya uu ahaa inay u guulwadeyso Farmaajo aanay dib u dooraneyn, ayada oo Farmaajo-na uu waxba u qaban waayey.
Doorashada kursigaan ayaa saacado dib u dhacday, kadib markii ay is baheysi ku dhawaaqeen Ubax maahee seddaxda musharax ee kale, taas oo keentay in Ubax Tahliil ay diido ka qeyb galka doorashadaas.
Dib u dhac saacado ah kadib waxaa Ubax Tahliil lagu qanciyey inay hoolka doorashada soo gasho, waxaana sidaas salaadii cishaha kadib ku bilaabatay doorashada kursigaas laga leeyahay koonfurta Gaalkacyo oo loolan adag wajahay.
Codeynta ayaa aheyd mid qarsoon oo ergadu ay sanduuq codkooda ku ridayeen, waxaana ugu dambeyntii kursiga HOP060 ku guuleysatay xildhibaan Qaali Cali Shire.